Construction Service - BaganMart
Construction Decoration & Other Services
Decoration Services ( Altar Room )
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 519 view counts
Brand : Loyal Moon Engineering
Model : Construction Service
လုပျငနျးအမညျ : Loyal Moon Engineering Co., Ltd.
ဖုနျးနံပါတျ : 09 420087707, 09 5312930
Loyal Moon Engineering ကုမ္ပဏီမှ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့် ခေတ်မီလှပသည့် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများနှင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဆောက်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြေကွက်ကျယ်ရှိသူများအတွက် လုံးချင်းစနစ်၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများအတွက် အခန်းပေး၊ အခန်းယူစနစ်များ၊ အစိုးရအဆောက်အအုံများလည်း ဆောက်လုပ်ပေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့Loyal Moon ကုမ္ပဏီမှ အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများက သင့်တင့်သောဈေးနှုန်း၊ ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး၊ သတ်မှတ်ချိန်ပြီးစီးမှုများအတွက် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ အချိန်တိုအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
Loyal Moon Engineering began asageneral works contractor in 2012. Over the years, the group has undertaken many challenging projects and accumulated skills and experiences in design and build solutions, project management services and related engineering works.
For Construction Service
May I get the quotation for "Construction Service " ?